Oliver Simms – Cast – Alpha Premium
Black Widow (2021) ##unicode Marvel ပရိတျသတျတှအေတှကျ စကားလကျဂြှနျဆနျသရုပျဆောငျထားတဲ့ Black Widow ဆိုတဲ့ကားလေး ထှကျရှိလာပါပွီ ဒီဇာတျကားမှာတော့ နာတာရှာရဲ့Avenger ဖွဈမလာခငျဘဝနဲ့ကလေးဘဝကိုပါစုံစုံလငျလငျ ရိုကျကူးပွထားတာတှရေ့မှာပါ သူ့ရဲ့အတိတျတုနျးကနခေဲ့ရတဲ့Red Room ဆိုတဲ့လုပျကွံသတျဖွတျသူအဖှဲ့အစညျးကိုဖကျြဆီးလိုကျပွီထငျခဲ့ပမေယျ့ ထိုအဖှဲ့အစညျးဟာသူမသိဘဲဆကျလကျတညျရှိနသေေးတဲ့အပွငျ ခေါငျးဆောငျဒရီကော့ဗျဆိုသူပါရှငျကနျြနတောကို သိလိုကျရပါတယျ ဒါ့အပွငျသူ့လိုမြိုးပဲ တခွားသောမိနျးကလေးတှကေိုလညျးဓာတုဆေးတှသေုံးပွီး လုပျကွံသတျဖွတျသူ (widow)တှအေဖွဈ ဖနျတီးနတောကို နာတာရှာတဈယောကျသိသှားတဲ့အခြိနျမှာ Red Room ကိုဖကျြဆီးဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ အကျရှငျအလနျးစားတှနေဲ့ အရမျးကိုကွညျ့ကောငျးတဲ့ဇာတျလမျးလေးမလို့ ကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦးနျော ဒီကားရဲ့နောကျဆုံးပိုငျးနား လေးမှာ Black Widow အသဈဖွဈလာမယျ့သူကိုတဈခါတညျးမိတျဆကျအစပြိုးပေးထားလို့ အဆုံးထိစောငျ့ကွညျ့ကွပါနျော ##zawgyi Marvel ပရိတ်သတ်တွေအတွက် စကားလက်ဂျွန်ဆန်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Black Widow ဆိုတဲ့ကားလေး ထွက်ရှိလာပါပြီ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ နာတာရှာရဲ့Avenger ဖြစ်မလာခင်ဘဝနဲ့ကလေးဘဝကိုပါစုံစုံလင်လင် ရိုက်ကူးပြထားတာတွေ့ရမှာပါ သူ့ရဲ့အတိတ်တုန်းကနေခဲ့ရတဲ့Red Room ဆိုတဲ့လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူအဖွဲ့အစည်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီထင်ခဲ့ပေမယ့် ထိုအဖွဲ့အစည်းဟာသူမသိဘဲဆက်လက်တည်ရှိနေသေးတဲ့အပြင် ခေါင်းဆောင်ဒရီကော့ဗ်ဆိုသူပါရှင်ကျန်နေတာကို သိလိုက်ရပါတယ် ဒါ့အပြင်သူ့လိုမျိုးပဲ တခြားသောမိန်းကလေးတွေကိုလည်းဓာတုဆေးတွေသုံးပြီး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူ (widow)တွေအဖြစ် ဖန်တီးနေတာကို နာတာရှာတစ်ယောက်သိသွားတဲ့အချိန်မှာ Red Room ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် အက်ရှင်အလန်းစားတွေနဲ့ အရမ်းကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမလို့ ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ဒီကားရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းနား လေးမှာ Black Widow အသစ်ဖြစ်လာမယ့်သူကိုတစ်ခါတည်းမိတ်ဆက်အစပျိုးပေးထားလို့ အဆုံးထိစောင့်ကြည့်ကြပါနော် Review – Phyu Sin File Size – 2GB,1GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p ...
The Old Guard (2020) ##unicode The Old Guards ကတော့ American Superherosဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ ဒီကားမှာတော့ နာမညျကွီးမငျးသမီးCharlize Theronရဲ့အမိုကျစားအကျရှငျတိုကျကှကျတှကေိုကွညျ့ရှုရမဲ့ကားလေးပါ Andyကရာစုနှဈပေါငျးမြားစှာအသကျရှငျသနျနကွေတဲ့တိုကျခိုကျရေးသမား၎ယောကျအဖှဲ့ရဲ့ခေါငျးဆောငျတဈဦးဖွဈတယျ။ သူတို့ကဘယျဒဏျရာမဆိုအလိုလိုပြောကျကငျးနိုငျကွပွီးသတျလို့မသနေိုငျကွတဲ့အစှမျးရှိသူတှဖွေဈတယျ။ တဈနမှေ့ာတော့CIAကလူတဈဦးဟာသူတို့လြို့ဝှကျခကျြကိုသိရှိသှားပွီးစမျးသပျခကျြတှလေုပျဖို့ထောကျခြောကျဆငျဖမျးဆီးဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ။ အဲ့အခြိနျမှာဘဲထာဝရာရှငျသနျနိုငျသူအသဈတဈယောကျ​ဖွဈတဲ့ပျေါလာခဲ့ပါတယျ။ စဈသားတဈယောကျNileဟာသူမရဲ့စဈဆငျရေးမှာဒဏျရာရခဲ့ပွီးသဆေုံးရာကနပွေနျလညျရှငျသနျလာသူဖွဈတယျ။ အဲ့အကွောငျးကိုအာဏာပိုငျတှသေိသှားပွီးသူမကိုစမျးသပျခကျြတှလေုပျဖို့ပို့ဆောငျဖို့ကွိုးစားသောအခါ AndyတဈယောကျNileကိုကယျတငျနိုငျပါ့မလား။သူတို့နောကျကိုလိုကျနတေဲ့လူတှရေဲ့လကျကရော သူတို့အဖှဲ့လှတျမွောကျနိုငျငကမလားဆိုတာစိတျဝငျစားစဖှယျကွညျ့ရှုရမဲ့ကားလေးပါ။ ##zawgyi The Old Guards ကတော့ American Superherosဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားမှာတော့ နာမည်ကြီးမင်းသမီးCharlize Theronရဲ့အမိုက်စားအက်ရှင်တိုက်ကွက်တွေကိုကြည့်ရှုရမဲ့ကားလေးပါ Andyကရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်သန်နေကြတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမား၎ယောက်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တယ်။ သူတို့ကဘယ်ဒဏ်ရာမဆိုအလိုလိုပျောက်ကင်းနိုင်ကြပြီးသတ်လို့မသေနိုင်ကြတဲ့အစွမ်းရှိသူတွေဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့မှာတော့CIAကလူတစ်ဦးဟာသူတို့လျို့ဝှက်ချက်ကိုသိရှိသွားပြီးစမ်းသပ်ချက်တွေလုပ်ဖို့ထောက်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ အဲ့အချိန်မှာဘဲထာဝရာရှင်သန်နိုင်သူအသစ်တစ်ယောက်​ဖြစ်တဲ့ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ စစ်သားတစ်ယောက်Nileဟာသူမရဲ့စစ်ဆင်ရေးမှာဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးသေဆုံးရာကနေပြန်လည်ရှင်သန်လာသူဖြစ်တယ်။ အဲ့အကြောင်းကိုအာဏာပိုင်တွေသိသွားပြီးသူမကိုစမ်းသပ်ချက်တွေလုပ်ဖို့ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးစားသောအခါ Andyတစ်ယောက်Nileကိုကယ်တင်နိုင်ပါ့မလား။သူတို့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့လူတွေရဲ့လက်ကရော သူတို့အဖွဲ့လွှတ်မြောက်နိုင်င်ကမလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားစဖွယ်ကြည့်ရှုရမဲ့ကားလေးပါ။ Review – Myet Chel File Size – 1.6GB Format…mp4 Quality : 1080p WEB-DL Duration…2h 5min Genre :Action, Fantasy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by ACP,Myet Chel Encoded by Arrow
bollywood series 50
Eng Series 106
Korea series 62
thai series 14
720p / Premium
App premium only
Alpha Premium © 2022 All rights reserved Disclaimer: Alphapremium.xyz is not in anyway associated with Gostream.is, Onlinemovies, Fmovies, Xmovies8, Putlocker sites. We do not host any videos on Alphapremium.xyz itself. Alphapremium.xyz is absolutely legal and contains only links to other third party websites like Youtube, Uptobox, Mediafire, Google, Picasaweb, Dailymotion, Openload, VK.com and many more which actually host videos. Alphapremium.xyz is not responsible for the compliance, copyright, legality, decency, or any other aspect of the content of other linked sites. If you have any legal issues please contact the appropriate media file owners or linked hosting websites. Alphapremium.xyz only and only provides links to third party video hosting sites which videos are uploaded by third party users. Alphapremium.xyz in no way affiliated with them nor intend to do that.